RASMI: Xilliga la ciyaari doono tartanka EURO 2020, kaasoo loo bedelay sanadka 2021-ka oo shaaca laga qaaday – Gool FM
(Yurub) 17 Juun 2020. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa maanta xaqiijiyay in tartanka qarammada Yurub ee EURO 2020 u qabsoomi doono sidii loo qorsheeyay marka laga reebo in taariikh ahaan loo jadwaleeyay inuu billawdo 11-ka bishan Juun, sidoo kalena uu dhammaado 11-ka Luulyo sanadka 2021-ka, inkastoo dhowaan Madaxweynaha UEFA ee Aleksander Ceferin uu sheegay inay suuro gal tahay in la dhimo magaalooyinka marti galinaya tartanka.
“12-kii magaalo ee asalka ahaa ayaa marti galin doona tartanka qarammada qaaradda Yurub xagaaga 2021-ka” ayaa lagu sheegay bayaan ay soo saartay UEFA.
Tartanka ayaa loogu yeeri doonaa magaca UERO 2020 inkastoo uu qabsoomi doono 2021, taasoo la micno ah in tartanka sidiisa uu noqon doono, balse kaliya waqtiga uu is-beddelay.
UEFA ayaa go’aansatay inay tartanka qarammada qaadda Yurub ay dib u dhigto 12 bilood si xagaagan loo dhammeystiro ciyaarihii horyaallada iyo tartammada Yurub ee heerka kooxaha, maadaama uu xilli ciyaareedkan aafeeyay xanuunka coronavirus sida uu xiriirku xaqiijiyay.
Goor hore ayay UEFA jabisay xeerkii lagu yaqaannay ee ahaa in hal ama labo waddan ay marti galiyaan tartanka, waxaana taas beddelkeed ay marti-galinta tartankan gacanta u galisay 12 magaalo oo kala duwan.
“Guddiga fulinta ee UEFA ayaa qeexay sida uu raalli kaga yahay magaalooyinka marti galinaya tartanka, xiriirrada ay hoos tagaan iyo dowladaha dalalkooda taageerada ay u muujiyeen xiriirka” ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xiriirka UEFA.
Ugu dambeyn, xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa xaqiijiyay in tikidhadii hore loo goostay ay shaqeyn doonaan marka tartanka la ciyaarayo sanadka 2021-ka.